आजदेखि विश्वकप क्रिकेट, को को भिड्दै छन् आज ? | NepalDut
आजदेखि विश्वकप क्रिकेट, को को भिड्दै छन् आज ?
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकपको १२औं संस्करण आजदेखि इङ्ल्यान्डमा सुरु हुँदैछ । लन्डनस्थित दी ओभल क्रिकेट स्टेडियममा बिहिबार साँझ भब्य उद्घाटनसँगै सुरु हुने खेलमा आयोजक इङ्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका भिड्दैछन् । घरेलु मैदानमा इङ्ल्यान्ड सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छ । दक्षिण अफ्रिका पनि पहिलो खेलमै घरेलु टोलीलाई निराश बनाउने दाउमा छ ।